The Altocumulus | Netwọk Mgbasa Ozi
Anyị na-aga n'ihu na nyocha nke ụdị igwe ojii dị iche iche nke edepụtara na Mtù Na-ahụ Maka etewa Worldwa (WMO). N'oge a anyị na-amalite inyocha igwe ojii dị n'etiti ma anyị ga-amalite site na ịkọwa njirimara, mmalite na ọchịchọ ịmata ihe ndị ọzọ nke Altocumulus.
A kọwara ụdị igwe ojii a dị ka ụlọ akụ, akwa oyi akwa ma ọ bụ akwa ọcha ma ọ bụ isi awọ, ma ọ bụ ọcha na isi awọ, nke nwere onyinyo nke mejupụtara taịl, ọtụtụ mmadụ, rollers, wdg, nke na-abụkarị akụkụ fibrous ma ọ bụ ịgbasa na nke ahụ nwere ike ọ gaghị adị n'otu; ọtụtụ n'ime obere ihe a na-ekesa mgbe niile, ha nwere obosara doro anya n'etiti 1º na 5º.
Ha na-ejikarị mmiri mmiri. Mgbe ọnọdụ okpomọkụ dị oke ala, kristal ice na-etolite. Usoro ọmụmụ ya ga-abụ nke a, mgbe nnukwu ikuku ikuku, nke usoro sistem na-agbanye, na-arịgo n'etiti ọkwa (4-6Km.) Ma na-agbakọta. N'aka nke ya, a na-emepụta igwe ojii ndị a site ejighị n'aka ikuku pụta, nke na-enye ha ọdịdị cumuliform ha. Ha na-abụkarị akụkụ nke ihu oyi na ihu ihu ọkụ. Na nke ikpe a, agwakọtara ha na otu oyi akwa na Altostratus, na-etinye mgbakwunye nke ọtụtụ puku kilomita kilomita.
Banyere ma hà na-enye anyị ihe ngosi banyere ihu igwe na-abịanụ, a maara na ndị nọpụrụ iche na-egosi ezigbo ihu igwe. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ha apụta na mmụba ma ọ bụ agwakọta ya na Altostratus ha na-egosi ihe idi nso nke ihu ma ọ bụ oké ifufe. N'ọnọdụ ndị a, ha nwere ike inye mmiri ozuzo. Ha ekwesighi inwe mgbagwoju anya na Cirrocumulus, Altocumulus buru ibu, ma obu Stratocumulus, ebe obu na Altocumulus di obere.
Foto igwe ojii ndị a bụ ezigbo mma ọkụ azụ, dị ka ọ dị na foto nke mbụ, ha na-egosi ọdịdị dị egwu. N’isi ụtụtụ ma ọ bụ n’ehihie, a na-enwe ekele maka nkọwa ya nke ọma. Site na oghere "Wide Angle" ha jidere ha n'ịdị ukwuu ha niile. Mgbe anyanwụ dara, ha na-acha uhie uhie nwa oge.
Altocumulos nwere ike ime 4 iche (Stratiformis, Lenticularis, Castellanus na Floccus) na 7 nkpuru (Translucidus, Perlucidus, Opacus, Duplicatus, Undulatus, Radiatus, Lacunosus).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Foto » Altocumulus